Ichibi laseShuswap, indawo yaseMagna Bay ene-suite ezimeleyo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJanet
Ibekwe ecaleni kweLake iShuswap enokufikelela echibini, ukuqaliswa kwesikhephe, ukurenta izikhephe, ukuhamba ngenqanawa kunye nevenkile elula ekufutshane.
Le ndawo ineepaki zoluntu, ipaki yephondo, iindlela zokuhamba intaba kunye nokuqhuba ukuya kubona isalmon yase-Adams River edumileyo ebaleka ekwindla kunye nembali yeSeymour Arm.
Uya kusebenzisa ibarbecue, indawo yomlilo kunye nepatio yangaphandle.
Ikhitshi lixhotyiswe: imicrowave, itoaster, ihotplate, ipani yombane yokuqhotsa, imbiza yekofu kwaye isebenza ngokupheleleyo.
I-Cable TV kunye ne-wifi
Igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, igumbi lokutyela, indawo yokuhlala kunye nekhitshi. Ngaphandle kwepatio enetafile kunye nezitulo ezi-4 kunye nefenitshala yepatio yangaphandle. Igadi enkulu enelizwe.
Ichibi leShuswap linobude be-1300 kms. yonxweme, iindlela ezininzi zokuhamba, zembali Seymour Arm, ipaki yePhondo e Scotch Creek kunye beach entle esanti, iipaki zasekuhlaleni kunye Tsutswecw (Roderick Haigh Brown) ipaki yePhondo, ikhaya lehlabathi odumileyo Adams umlambo salmon run.
Ukonwatyiswa iHub, ekwiScotch Creek, ibamba iFriday Night Live ngaphandle rhoqo ngolwesihlanu ngexesha lasehlotyeni ngomculo omnandi, ukutya kunye neendawo zokuthengisela kunye nebhiya newayini ekhoyo. I-Hub ikwabonelela ngokutya okumnandi kunye nezinto ezininzi ezintle ezenzekayo.
Ipaki yoluntu lwendawo yimizuzu emi-5 ukuhamba kwicala elinye okanye imizuzu emi-3 ukuqhuba kwelinye, kunye nokufikelela kunxweme lwendlela.
Sichithe iingokuhlwa ezininzi ezinomdla malunga nomlilo wenkampu kunye neendwendwe zethu, kodwa ukuba bakhetha ukuba bodwa sonwabe kakhulu ngaloo nto, sinokufikelelwa nge-imeyile okanye ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Magna Bay